methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် (methylamino) propanoate (3-24549-12), ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် methyl 0- အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) - APICMO ကဗီဒီယို
methyl 3- (methylamino) propanoate လည်း caaled methyl 3-methylaminopropionate; methyl,3- [(N-methyl) မိုင်နို] propionate; 3- (methylamino) propanoic အက်ဆစ်, methyl Ester; MeNHCH2CH2COOMe;
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD11505527
InChI Key ကို NGNUXOCKVMKGQL-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း methyl 3- (methylamino) propanoate
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 117.14
အပြုံး CNCCC (= အို) OC
အရောင် N / A
ရေဆူမှတ် 318.7 mmHg မှာကို C ° 15.0 ± 760
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
(24549-12-0) GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အဆိုပါ ECHA ကို C & L ကို Inventory မှ 1 အကြောင်းကြားစာထံမှ 1 ကုမ္ပဏီကပေး GHS သတင်းအချက်အလက်။
H226 (100%): Flammable အရည်နှင့်အခိုးအငွေ့ [Flammable အရည်သတိပေး]
H302 (100%): အန္တရာယ် [ပါးစပ်စူးရှသောအဆိပ်သတိပေး] မျိုလျှင်
H315 (100%): [အရေပြားချေး / ယားယံသတိပေး] အသားအရေယားယံစေတယ်
H318 (100%): [အန္တရာယ်ပြင်းထန်မျက်စိပျက်စီးမှု / မျက်စိယားယံ] လေးနက်မျက်စိပျက်စီးမှုကိုစေတယ်
H335 (100%): အတိအကျပစ်မှတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအဆိပ်, တစ်ခုတည်းထိတွေ့သတိပေး [အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယားယံစေနိုင်ပါစေ; အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယားယံ]
methyl 3- (methylamino) propanoate က First Aအိုင်ဒီ:
အရေပြားအဆက်အသွယ်: ပိုးအဝတ်အစား Remove နှင့်ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်သေချာစွာအသားအရေဆေးကြောပါ။ သငျသညျမသက်မသာခံစားရမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရယူပါ။
မျက်လုံးချင်း: အမျက်ခမ်းရွေးချယ်ခွဲထားနှင့်ရေသို့မဟုတ်ဆား running နှင့်အတူသုတ်ခြင်း။ ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြလော့။
ထည့်သွင်းသည့်: အဘယ်သူမျှမအန်ပါးစပ်ဆေး။ ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြလော့။
သတိပေးချက်: ဒီက web site ပေါ်တွင်ပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်၎င်း၏စာအုပျ၏ရက်စွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ယုံကြည်ချက်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ ပေးထားသောအချက်အလက်များသည်သာဘေးကင်းလုံခြုံကိုင်တွယ်နှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအာမခံသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကို specification.315-H319-H335 ဖြစ်စေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်မဟုတ်ပေ။
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0)
သငျသညျသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်စိတ်ဝင်စားမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပါသလား APICMO, အဘယ်သူ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဓာတ်ငွေ့ Chromatography နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးထားပြီးသန့်စင်သောအရည်အသွေးကို methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0), အတူသင်တို့သည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်အတိုင်း, cGMP စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ။
methyl 3- များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ (methylamino) propanoate (24549-12-0)
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) အကြောင်း
[(N-methyl) မိုင်နို] propionate, 3- (methylamino) propanoic acidmethyl Ester, methyl N-methyl-beta-alaninate, N-methyl-beta-alanine methyl Ester, ဒါမှမဟုတ် methyl3- ထုတ်ကုန်မဟုတ်ရင် methyl3အဖြစ်လူသိများသည် - (methylamino) propanoate
methyl 3- (methylamino) propanoate အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါ proteomic သုတေသနနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အသုံးဝင်သော
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 24549-12-0
ဓာတုနာမကိုအမှီ methyl 3- (methylamino) propanoate
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 0.9
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ် (C) 318.7 ± 15
IUPAC name ကို methyl 3- (methylamino) propanoate
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 117.148
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 117.079
နာမ် · methyl N-methyl-beta-alaninate
· N-methyl-beta-alanine methyl Ester
· methyl 3- (methylamino) propanoate
· 3-methylamino-propionic အက်ဆစ် methyl Ester
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) ၏ဓာတု & ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
လက်ခံသူအရေအတွက် - 3
24549-12-0 computing Properties ကို
XLogP3-AA ကို -0.4
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 38.3 တစ်ဦး2
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 8
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 117.079
methyl 3- ၏ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း (methylamino) propanoate (24549-12-0)
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
အဘယ်သူမျှမ CAS ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖော်မြူလာ
methyl 3- (methylamino) GHS ဇက်ဖော်ပြချက် propanoate
methyl 3- (methylamino) propanoate လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကွာစက်နှိုးအရင်းအမြစ်, မီးတောက်, မီးစများ၌၎င်း, ဒါမှမဟုတ်မီးကနေစောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေပါ။
အဆိုပါထုတ်ကုန်တစ်ခုနာကျင်ကျိန်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ အရေပြား, မျက်စိ, ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ကတိကျတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏ပြင်းထန်သောယားယံစေပါတယ်အခါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ရောင်ရမ်းမျက်လုံးစူးရှသောအဆိပ်အတောက်များနှင့်အမြဲတမ်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
methyl 3- (methylamino) propanoate အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
1 ။ methyl 3- (methylamino) propanoate ကိုင်တွယ်
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအများဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုယူပါ။ အပြည့်အဝမျက်နှာ, လက်, ခြေ, မျက်စိ, နှင့်အခြားမြင်နိုင်သောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်အသားအရေအဆက်အသွယ်, ရှူရှိုက်မိခြင်းသို့မဟုတ်မျိုမှရှောင်ရှားရန်သေချာစေပါ။ လူအားလုံးတို့သည်ကာကွယ်မှုဂီယာအမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ဥရောပအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်မာခ်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သော NIOSH အဖြစ်နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများကအတည်ပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်။
စားမသောက်, ဒါမှမဟုတ် methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) သုံးနေစဉ်ဘာမှမျိုးစုံမြည်းစမ်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဓာတုအငွေ့ပါးပျဉ်း, တစ်ဦးဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်း, အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်နှင့်လေထုသန့်ရှင်းရေးကိရိယာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးတစ်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကိုသုံးပါ။ အနည်းဆုံးအဲဒီဘေးကင်းလုံခြုံမှုအင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုမှနီးကပ်သင်သည်ကောင်းသောအချိန်အတွက်အရေးပေါ်ပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်။
2 ။ သိုလှောင်ခြင်း
Store ကိုတံခါးပိတ်လုံခွက်၌ methyl 3- (methylamino) propanoate နဲ့လုံလုံခြုံခြုံ access.The အခန်းထဲမှာရရှိမှုအနေဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရာဌာန၌သော့ခတ်, အေးမြကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်နှင့်ခြောက်သွေ့သောဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါစံပြသိုလှောင်မှုအပူချိန် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
3 ။ methyl 3- (methylamino) propanoate အသုံးပြုခြင်းပြီးနောက်
methyl 3- (methylamino) propanoate ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ
1 ။ ရှူရှိုက်မိခြင်း
တစ်ဦးကဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုသူ methyl 3- (methylamino) propanoate ၏လည်းကောင်းအဆိုပါအငွေ့သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်ရှူနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုအတည်ပြုအသက်ရှူကိရိယာနှင့်သင်၏စမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်အကြံပြုလိုတယ်။
ကိစ္စတွင်သားကောင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူအခန်းတခန်းမှသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းခြင်း, အဆိပ်ထုတ်လွှတ်မှု breaths သူတို့ကိုတစ်ဦးအဆင်ပြေအနေအထား၌ကျိန်းဝပ်ရှိသည်။ သတိလစ်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်သည့်အခါအသက်ရှုမဝြခင်းလည်းမရှိမှအတုအသက်ရှူသုံးပါ။ အောက်စီဂျင်စက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါလျှင်, အဲဒီလိုနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့်ချက်ချင်းအကူအညီကိုရှာ။
4 ။ ထိတှေ့
အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် methyl 3- (methylamino) propanoate နှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အရေပြားမှမတော်တဆ splash ၏အမှု၌, ဖြောင့်သွားစွန်းသောအဝတ်ကိုချွတ် ယူ. ကျော် 15 မိနစ်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဆပ်ပြာနှင့် water.Continue ၏ပဒေသာနှင့်အတူအရပျကိုသုတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည်ဆက်လက်ရှိသည့်အခါဆေးဝါးအကူအညီရယူပါ။
အစစ်အမှန်အချိန်၌ဤလိပ်စီမံခန့်ခွဲရန်, သင့်လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာလက်လှမ်း eyewash နှင့်အတူ install လုပ်ဖို့သင့်၏။ စိတ်မကောင်းထက်၎င်း၏ပိုကောင်းလုံခြုံကတည်းကအမြဲတမ်းညာဘက်ကိုမျက်မှန်ပေါ်မှာထားတော်မူ၏။
ရေသို့မဟုတ်ဆား၏လုံလောက်သောငွေပမာဏနှင့်အတူမျက်ခမ်းခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ပေးထားသော methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့်ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်ရ, မျက်စိပျက်စီးစေဖွယ်ရှိကြောင်း။
5 ။ စားသုံးမိပါ
methyl 3- (methylamino) propanoate မျိုချမိပါအပေါ်မျိုအခါရအရေးပေါ်ကုသမှုအခြေအနေမျိုးမှာမသင်နှုတ်တစ်ဦးသတိလစ်လူတစ်ဦးမှဘာမှစီမံခန့်ခွဲသင့်တယ်သတိ victims.Under သာသက်ဆိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်အန်လှုံ့ဆော်ဖို့ကြိုးစားပါဘူး။
15 မိနစ်ထက်မနည်းအဘို့ရေအေး၏ copious ပမာဏနှင့်အတူပါးစပ်ဆေးကြောပါ။ ဝက်လီတာပမာဏနို့သို့မဟုတ်ရေဖြစ်စေသောက်ပါ။ သငျသညျမမှန် feeling ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှင်တစ်ဦးအဆိပ်စင်တာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်နှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဒေတာစာရွက်ယူသတိရပါ။
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) မီးသတ်သမားဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒီထုတ်ကုန်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မီး methyl 3- ပါဝင်ပတ်သက်နေ (methylamino), ဒုတိယထုတ်ကုန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်စက်နှိုးအရင်းအမြစ်သူ့ဟာသူ propanoate လိမ့်မည်။ အဆိုပါမီးလောင်များ၏ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး CO ကိုသုံးပါ2ငြိမ်းအေးရန်, ခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်, ဒါမှမဟုတ်ပေါ်လီမာရေမြှုပ်။ လောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်များ၏အလားအလာအဆိပ် emissions.Some အသက်ရှူခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန် Self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားဝတ်ဆင်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သို့၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေနိုင်မတိုင်မီ methyl 3- (methylamino) propanoate spillages ကို clean up ။ တံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်းအာဂွန် absorbentand သိုက်နှင့်အတူထုတ်ကုန်ရောမွှေပါ။ ညီပုယိုဖိတ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
methyl 3- ၏တည်ငြိမ်မှု & reactivity (methylamino) propanoate (24549-12-0)
အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းထိန်းချုပ်ထားအပူချိန်အောက်မှာတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအပူချိန်မြင့်တက်, အပူ, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံးဖိအားကိုပြိုကွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအပြင်, methyl 3- (methylamino) propanoate CO နှင့် NOx ဖွဲ့စည်း, ပြိုကွဲလိမ့်မယ်။
methyl 3- (methylamino) propanoateWaste ရှင်းသိကောင်းစရာများ
အထူးစွန့်ပစ်အဖြစ် methyl 3- (methylamino) propanoate ဆက်ဆံပါနှင့်ပပျောက်ရေးစဉ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ တစ်ပိုလုံခြုံစွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်ဒေသခံတစ်ဦးလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာကြလော့။
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) သင်္ဘောအင်ဖို
methyl 3- (methylamino) propanoate ထိန်းချုပ်ထားအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦးသာမန်ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်တင်ပို့နေသည်။
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) စည်းမျဉ်းပြန်ကြားရေး
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) ရက်တွင်ပြုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမဆိုကင်ဆာဂုဏ်သတ္တိများသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာဂေဟစနစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးများထင်ရှားမထားပါဘူး။
ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ Sara ခေါင်းစဉ် III ကိုအားဖြင့် asoutlined လိုအပ်ချက်များကိုသတင်းပို့တံခါးခုံအထက်မသွားကြပါဘူး။
ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ပစ္စည်းအတွက် excel သူကိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဘဝသိပ္ပံ, Chromatography, ဓာတုပေါင်းစပ်နှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူ။
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
methyl 3- ၏လိုအပ်ချက်အတွက် (methylamino) propanoate (24549-12-0) သေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အမြောက်အများပမာဏ? အကြှနျုပျတို့နှငျ့ Register သင့်ရဲ့အကောင့်ကို sign, နှင့်စျေးနှုန်းရှုမြင်ကြသည်။ အမိန့်နေရာ, APICMO ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုဆက်သွယ်ပါ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်အမျိုးသားရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, Pubchem, methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0), ကဏ္ဍများ 1-10 ။
Chang-EunYeomMi JeongKimB ။ MoonKim, DBUCatalyticNitrogen nucleophile sConjugate များအပြင်, အတှဲ 63, Issue 4, 22 ဇန်နဝါရီလ 2007, စာမျက်နှာများ 904-909 ။
ပညာရှင် Hans, Ulrich Stilz, Wolfgang ကို Guba, Bernd Jablonka, Melitta ရုံ, Otmar Klingler, Wolfgang ကိုKönig, Volkmar Wehner နှင့် Gerhard Zoller, ဆေးပညာ Chemistry2001 44 ၏ဂျာနယ် (8), 1158-1176